Ahoana ny fametrahana swap swap amin'ny Linux
Ny swap dia ampahany manan-danja amin'ny Linux, ary ny fomba itantanany ny programa. Amin'izany, ireo mpampiasa Linux dia afaka mijanona amin'ny RAM, ary manome fahazoan-dàlana fanampiny ho an'ireo programa ampiasaina rehefa mivoaka ny RAM. Raha ny marina, tokony hilaza ny rehetra fa tokony hampiasa swap. Amin'ny alàlan'ny fampitahana Linux, ...
Ireo programa tsy mamaly ao amin'ny Windows 10 / 8 / 7
Indraindray dia mety nahita hafatra ianao fa nisy fandaharana sasany najanona tamin'ny solosainanao Windows. Ny anton'ny fandaharan'asa toy izany tsy mamaly na ny programa dia tsy mitsahatra miasa na mamaly ny hafatra dia mety ho maro ary ao koa ny safidy fitsabahana hafa ihany koa. Manana isika …
QNAP Mampiseho ny TS-1685 Robot - ny 16-bay Xeon DSuper NAS manohana ny expansionability PCIe sy ny XXXX SSD Caching
QNAP® Systems, Inc. androany nanambara ny raharaham-barotra vaovao-ts-1685 kilasy Desktop 16-Bay Xeon® D Super NAS izay manohana roa ambin'ny folo 3.5 "aelin'ny mafy sy efa-2.5" SSDs, manome enina M.2 SSD slots, ary manasongadina mahery vaika Ny processeur Intel® Xeon® D dia manome ny fahombiazany amin'ny fitehirizana avo lenta. Designed ...
CES 2017: EVGA manolotra ICX Cooler, Expandable AIO Watercooling and More
Nitifitra nankany amin'ny Bellagio izahay, nahita ny namantsika tao amin'ny EVGA. Nanana zavatra vaovao maro mba hiresaka momba anisan'izany ny vaovao 7 DG-raharaha, ICX mangatsiaka kokoa ho an'ny 1060 / 1070 / 1080, ny vaovao farany fahefana famatsian-dalana (B3 / G3 hatramin'izao), ary ny vaovao, expandable AIO lineup. Ianao ...
Fandefasana finday tsara indrindra sy ny ultrabooks amin'ny 2017 - mividy toro-lalana sy toro-hevitra
Ny fahazoana ny solosaina finday izay mifanaraka amin'ny fepetra takina aminao sy ny teti-bola dia tsy asa mora amin'izao andro izao, satria tsy maintsy misafidy ny safidy tsara vitsivitsy. Afaka manampy aho na izany aza. Efa nampiasa ordinatera ultra-portable sy ultrabooks aho nandritra ny 10 taona izao ary ...
Mitondra ny laptop Ubuntu Linux amin'ny mpampiasa Pro ny System76 mitondra an'i 4K
Farany, vaovao tsara ho an'ny mpankafy an'i Apple izay nanafika ny tranokalan'ny System76 andro vitsy lasa. Apple manao laptop tsara. Na izany aza, tsy manana safidy hanampiana RAM na port na grafika fanampiny izy ireo. Ny laptop System76 vaovao Oryx dia manana fampiratiana 4K HiDPI. Raha ianao …
QNAP ao amin'ny CES 2017 - Thunderbolt 3 sy Xeon D NAS mera, trano fonenana an-tokantrano ary maro
Tao anatin'ny fitsidihan'ny mpivarotra CES mahazatra ahy dia nahatratra ny QNAP aho ary nijery ny vokatra vaovao sy ny endri-tsoratra QTS nipoitra teo amin'ny tsena roa tonta. Ny vokatra nahitako ny masoko dia nahitana andian-dahatsoratra vaovao ...
Fomba hanatsarana ny Odoo
Odoo no rindrambaiko malaza ERP (Enterprise Resource Planning), voasoratra ao Python ary mampiasa PostgreSQL ho toy ny back-end of daty. Ny famoahana ny fiarahamonin'ny Odoo dia loharanom-pahalalana malalaka sy malalaka izay ahitana ny fitantanana ny tetikasa, ny famokarana, ny fitantanam-bola, ny faktiora ary ny fitantanana ny varotra, ny fitantanana ny trano, ny loharanon-karena ary ny ...
ZenFone AR: Ny smartphone voalohany manerantany miaraka amin'ny 8GB an'ny RAM
CES 2017 - ASUS dia nanambara ny ZenFone AR - smartphone voalohany manerantany izay sady mazoto no miara-miasa amin'ny Tango. Niforona niaraka tamin'ny Google ny ZenFone AR mba hanolotra ny traikefa Tango sy Daydream tsara indrindra. ZenFone AR koa dia fitaovana voalohany ampiasaina amin'ny Tango ampiasaina ...
Tena mila mihoatra noho ny 16 GB RAM amin'ny MacBook Pro ve ianao?
MacBook Pro 2016 dia mipoitra ao amin'ny 16 GB RAM, fa izany no fiatrehan'ny fifanarahana ho an'ny rehetra? Mazava ho azy, mila olona mihoatra noho ny 16 GB RAM (fahatsiarovan'ny random access) ny olona sasany. Ny olona sasany, noho ny asa aman-draharahany, dia handray soa avy amin'ny RAM ho toy ny ...
PC mpilalao sarimihetsika tsara indrindra: 7 amin'ireo rihitra avo indrindra azonao vidiana amin'ny 2016
Na eo aza ny tsy fitovian-toaka kely, ny endrika lalao PC dia tsara kokoa noho ny hatramin'izay. Ny fanorenana toeram-pamokarana lehibe indrindra, toy ny The Millennium Origin, izay manara-maso ny hoavy, dia miaraka amina fitaovana vaovao toy ny Lenovo IdeaCentre Y710 Cube. Ny fahatsoran'ny fivarotana nomerika toy ny Steam sy ny Windows 10 Store ...
Tsaho: iPhone, MacBook mba hahazoam-bola mihenina, RAM bebe kokoa
Ny fikarohana vaovao dia manolotra ihany koa ny vidiny ambany ho an'ny famolavolana MacBook 2017 namelombelona. Apple dia afaka nanambara ny MacBook vaovao sy ny vidin-tsakafo ho an'ny modely amin'izao fotoana izao amin'ny fiandohan'ny herintaona, araka ny voalazan'ny mpandalina Ming-Chi Kuo an'ny KGI Securities. Ny fanamarihana farany an'i Kuo dia maminavina fa Apple dia ...
Ny 2017 MacBook Pro dia mety manana RAM bebe kokoa sy marika ambany kokoa
Ny Apple's refreshed MacBook Pros dia mbola tsy tonga any am-pivarotana akory aza, fa efa azontsika sahady ny zavatra eritreretina avy amin'ny modely amin'ny taona ho avy. Ny fiovana tsotsotra indrindra dia ny fampidirana ny 32GB an'ny RAM, izay mety ho fandraisan'anjara tsara-ilay Pros ...
LeEco US Flash Sale: Fivarotana manaraka amin'ny Nov. 9
Ny takarivan'ny LeEco tamin'ny alarobia dia ny fivarotam-panafihan'i LeEco voalohany ny fitaovany tao Etazonia. Fa ny mpanjifany dia mbola afaka maninjitra ny tanany amin'ny fitaovana ao amin'ny orinasa - mitazona ny fivarotana fantsom-panafody vaovao amin'ny Nov. 9 manomboka ny 1 PM EDT. Ny fitaovana atolotra dia ahitana ny LeEco ...
Alienware dia manomboka ny "world's first" 13-inch VR-ready notebook
Ny Alienware dia nanambara ny Alienware 13 mpilalao gaming vaovao izay mividy ny famatsiam-bola voalohany ho an'ny VR-ready efa misy eto amin'ny 13-inch, noho ny fampidirana ny GPU Nvidia GeForce GTX 10-Series. Ny fandaharana dia tonga amin'ny modely efatra fototra: modely TN, ...
Razer Blade Pro Razer Blade Pro: GTX 1080 Ary 4K G-SYNC
Fotoana fohy taorian'ny namoahan'i Razer ny Razer Blade Pro, izay ny laptop 17.3-inch solosin'ny solosaina azy. Ny modela efa nivoaka dia mbola manana processeur Haswell amin'ny GTX 960M. Efa somary hafahafa foana fa ny fitaovam-piadiana Razer Blade 14-inch dia ampy fitaovana matanjaka kokoa ...
Meizu M5 dia mamakivaky ny TENAA - 2 / 3 / 6GB an'ny RAM sy 16 / 32 / 64GB an'ny fitehirizana
Manodidina ny androm-pihetsiketsehan'ny 31 ny volana oktobra, ny Meizu M5 dia manana ny mari-pamantarana TENAA amin'izao fotoana izao miaraka amin'ny sary mivantana, mamoaka, ary ny valiny. Tahaka ny mahazatra dia maneho ireo singa manan-danja ny fizotry ny banky Shinoa, ary misy tsipiriany mahaliana amin'ity fotoana ity. For starters, ...
Xiaomi Mi Note 2 mipoitra mialoha ny hetsika Oktobra
Xiaomi dia vonona ny hamoaka ny Mi Note 2 amin'ny herinandro ambony, saingy noho ny Weibo, ankehitriny dia mijery akaiky ny orinasan-tserasera manaraka manaraka. Araka ny voalazan'ny PhoneArena, ny Xiaomi Mi Note 2 dia hanana sony 5.7-inch Super AMOLED, Snapdragon 821 SoC, ...
Fandefasana finday tsara indrindra sy ny ultrabooks amin'ny 2016 - mividy toro-lalana sy toro-hevitra
Ny fahazoana ny solosaina finday izay mifanaraka amin'ny fepetra takina aminao sy ny teti-bola dia tsy asa mora amin'izao andro izao, satria tsy maintsy misafidy ny safidy amina ampolony. Afaka manampy aho na izany aza. Efa nampiasa ordinatera ultra-portable sy ultrabooks aho nandritra ny 10 taona izao ary efa ...
Ny tranokalan'ny mpanjifa Intel farany dia ny X99. Ny tranonkala 6950X sy ny XAXXX vao haingana dia novolavolaina vao haingana tamin'ny famerenam-bokatra kely, ny chipset amin'ny X99 dia manipika ireo lakolosy, sivana sy trano fandroana. Ny karazana fahatsapana ao anatin'ity tontolo ity ihany koa, tahaka ny ...
1 2 3 4 ... 25 Manaraka
Toetoetra Video SSD Cortana Users HTTP One ' MAMAKA ubuntu 15.04 fitaovana Plugins web server bilaogy Microsoft Windows Samsung Galaxy Windows Phone Unix lalao Ubuntu 14.10 app store web browser haino aman-jery sosialy Linux PDG iPhone hametraka endri-javatra Samsung Windows 8 Fitaovana finday taona Time Unité centrale CentOS 7 nbsp Debian Up " ram Android HTTPS 10 04 command line Company vaovao farany Windows 10 IP adiresy fitaovana SSH fitaovana YouTube Twitter Chrome lalao fifamoivoizana Plugin bilaogy afa-po WordPress SEO Screen raki-daza finday avo lenta fanamarinana Database Apache File Facebook famotsorana Malagasy Bible PPA 'App MySQL Google Command rafitra OS X Nginx API tahirin-kevitra fikarohana loharano misokatra CentOS takelaka fikirakirana Ubuntu 14.04 windows update Rafitra fikirakirana paoma fitaovana finday Apple Watch Linux Ubuntu Systems Microsoft Apps toe-tsaina PHP Support GNOME Linux Mint HTML rindrambaiko Bing Ubuntu (rafitra fandidiana) Ubuntu USB famerenana Server "PC Firefox Windows Ubuntu 16 Phone